Izinto ezili-10 zokuSebenza ngokuPhezulu, ukuThumela umyalezo we-imeyile ikopi | Martech Zone
Izinto ezili-10 zokuSebenza ngokuSebenzayo, ezibandakanya ikopi yomyalezo we-imeyile
Ngelixa i-imeyile iqhubele phambili kancinci kule minyaka ingamashumi idlulileyo nge-HTML, uyilo oluphendulayo, kunye nezinye izinto, amandla okuqhuba emva kwe-imeyile esebenzayo ikopi yomyalezo ukuba ubhale. Ndihlala ndiphoxekile kwii-imeyile endizifumanayo ezivela kwiinkampani apho ndingazaziyo ukuba zingoobani, kutheni bandithumelela i-imeyile, okanye nokuba balindele ukuba ndenze ntoni ngokulandelayo… kwaye oko kubangela ukuba ndingabhalisi kubo ngokukhawuleza njengoko ndibhalisa. ukwenzela bona.
Ndisebenza nomthengi okwangoku ukubhala ikopi yee-imeyile zabo ezizenzekelayo… isaziso sokubhalisela, ukwamkela i-imeyile, ii-imeyile ezingaphakathi, i-imeyile yokusetha kwakhona iphasiwedi, njl njl. ukuba ndityhile ii-nuances ezaneleyo kwamanye amanqaku akhuphisanayo ukuba babelane ngeengcinga zam kunye neziphumo zam apha.
Umthengi wam ebelinde ngomonde ukuba ndiwugqibe lo msebenzi… ndicinga ukuba ndiza kuvula uxwebhu lwamagama, ndibhale ikopi yabo, kwaye ndiyinike iqela labo lophuhliso ukuba lifake kwiqonga labo. Ayenzekanga kuba yonke into kufuneka icingisiswe kakuhle kwaye ifuna itoni yophando. Ababhalisi abanamonde kule nkampani echitha ixesha labo ngokutyhala unxibelelwano olungaxabisekanga. Ndifuna ukuqinisekisa ukuba ubume bezi imeyile bungaguquguquki, becingisiswe kakuhle, kwaye babekwa phambili ngokufanelekileyo.
Inqaku eliphambili: Andizukuthetha kubeko, uyilo, okanye Ukulungiswa nantsi… le icacile kwikopi oyibhalayo kwiimeyile nganye.
Ikopi esebenzayo ye-imeyile
Kukho izinto eziphambili ezili-10 endizichongileyo ekubhaleni ikopi efanelekileyo ye-imeyile. Qaphela ukuba ezinye zazo zinokuzikhethela, kodwa iodolo isabalulekile njengombhalisi we-imeyile osasaza nge-imeyile. Ndifuna ukwehlisa ubude be-imeyile. I-imeyile kufuneka ukuba ide ibekho ukufikelela kwinjongo zonxibelelwano… hayi ngaphantsi, hayi ngaphezulu. Oko kuthetha ukuba kukuseta kwakhona iphasiwedi, umsebenzisi ufuna nje ukwazi ukuba makenze ntoni kwaye enze njani. Nangona kunjalo, ukuba linqaku lebali elonwabisayo, amagama angamawaka ambalwa anokufanelekile ukonwabisa umbhalisi wakho. Ababhalisi abanangxaki ngokuskrola ixesha elide ukuba ulwazi lubhalwe kakuhle kwaye lwahlulelwe ukuskena kunye nokufunda.
Umgca weSifundo Umgca wesifundo sakho yeyona nto ibaluleke kakhulu xa usenza isigqibo sokuba ingaba umbhalisi uza kuyivula na i-imeyile. Ezinye iingcebiso ngokubhala imigca yesifundo esebenzayo:
Ukuba i-imeyile yakho iyimpendulo ezenzekelayo (ukuhambisa, ipassword, njl.), Yitsho nje. Umzekelo: Isicelo sakho sokusetha kwakhona iphasiwedi [iqonga].
Ukuba i-imeyile yakho iyafundisa, buza umbuzo, faka i-factoid, sebenzisa uburharha, okanye ukongeza i-emoji etsala ingqalelo kwi-imeyile. Umzekelo: Kutheni le nto i-85% yeprojekthi yenguqu yedijithali isilele?
Intloko -Iinkqubo ezininzi kunye neenkampani azibonisi ngcinga zininzi kwintloko engaphambi kokubhaliweyo. Lo ngumbhalo okhangelwe ngaphambili oboniswa ngabathengi be-imeyile phantsi komgca wesifundo sakho. Zihlala ziyimigca embalwa yokuqala yomxholo ngaphakathi kwe-imeyile, kodwa nge-HTML kunye neCSS ungenza ngokusesikweni isicatshulwa esingaphambi kwesihloko kwaye uyifihle ngaphakathi komzimba we-imeyile. I-preheader ikwenza ukuba wandise kumgca wesifundo sakho kwaye ubambe ingqwalaselo yabafundi, ubakhuthaze ngakumbi ukuba bafunde yonke i-imeyile. Umz. Ukuqhubeka nomgca wenguqu yedijithali yentloko apha ngasentla, intloko yam inokuthi, Uphando lubonelele ngezi zizathu zintathu zilandelayo zokuba kutheni iiprojekthi zenguqu yedijithali zisilela kumashishini.
ukuvula -Isiqendu sakho sokuvula sinokuba sisandulela sakho okanye ungasebenzisa ithuba elongezelelekileyo ukongeza isibuliso, usete ngokupheleleyo ithoni, kwaye umisele iinjongo zonxibelelwano. Umzekelo: Kweli nqaku, siza kwabelana ngophando olubanzi olwenziweyo ngaphakathi kweenkampani ezingama-Fortune 500 ezibonisa izizathu ezi-3 eziqhelekileyo zokuba iiprojekthi zenguqu yedijithali zisilele ngaphakathi kwishishini.
U mbulelo (ngokuzithandela) -Ukuba usete ithoni, unganqwenela ukubulela umfundi ngokuzikhethela. Umzekelo: Njengomthengi, sikholelwa ekubeni kubalulekile ukuba sabelane ngolwazi olunje ukuphucula ixabiso esilizisa kulwalamano lwethu. Enkosi ngenkxaso yakho [kwinkampani].
umzimba -Lihloniphe ixesha labantu ngokunikezela ngokufutshane nangokuyilayo ulwazi ukufikelela kwiinjongo ozixele ngasentla. Nazi iingcebiso ezimbalwa…
Sebenzisa fomati ngokonga nangokufanelekileyo. Abantu bafunda ii-imeyile ezininzi kwizixhobo eziphathwayo. Banokunqwenela ukuskrolela kwi-imeyile kuqala kwaye bafunde iintloko, emva koko bembe nzulu kumxholo. Iintloko ezilula, amagama anesibindi, kunye neendawo zebhulethi kufuneka zanele ukubanceda baskene kwaye bagxile kwikopi abayifumanayo inomdla.
Sebenzisa yemizobo ngokonga nangokufanelekileyo. Imifanekiso inceda ababhalisi baqonde kwaye bagcine ulwazi olunikezelayo ngokukhawuleza ngaphezu kokufunda isicatshulwa. Cinga ngokujonga itshathi yepie kunokufunda amanqaku ebhulethi kunye namaxabiso… itshathi isebenza ngakumbi. Imizobo akufuneki ibe sisiphazamiso, okanye isimahla, nangona kunjalo. Asifuni ukuchitha ixesha labafundi.
Isenzo okanye iSibonelelo (ukhetho) -Xelela umsebenzisi ukuba enze ntoni, kutheni kufuneka ayenze, kwaye uyenze nini. Ndingacebisa kakhulu ukuba usebenzise iqhosha lolunye uhlobo ngomyalelo kulo. Umzekelo: Ukuba ucwangcisa iprojekthi yakho yenguqu yedijithali elandelayo, cwangcisa intlanganiso yasimahla yokubonisana ngoku. [Iqhosha leShedyuli]
ingxelo (ngokuzithandela) -Cela kwaye unikezele ngeendlela zokunika ingxelo. Ababhalisi bakho bayakuvuyela ukumamela kwaye kunokubakho nethuba leshishini xa ucela ingxelo yabo. Umzekelo: Ngaba ufumene olu lwazi luxabisekile? Ngaba sikhona esinye isihloko ongathanda ukuba siphande ngaso kwaye sinike ulwazi ngaso? Phendula kule imeyile kwaye usazise!
Resources (ukhetho) -bonelela ngolwazi olongezelelekileyo okanye ololunye uxhasa unxibelelwano. Olu lwazi kufuneka lube kufanelekile kwinjongo zonxibelelwano. Kule meko ingentla, inokongezwa, iiposti zebhlog ezifanelekileyo ozenzileyo, ezimbalwa zamanqaku ngesihloko, okanye ezona zixhobo zichazwe kwinqaku.
Dibanisa Nika iindlela zonxibelelwano (iwebhu, intlalo, idilesi, umnxeba, njl. Yazisa abantu ukuba bangadibana njani nawe okanye inkampani yakho kwimidiya yoluntu, ibhlog yakho, inombolo yakho yefowuni, okanye nendawo okuyo.
Isikhumbuzo -Xelela abantu ukuba babhalise njani kwaye babonelele ngeendlela zokuphuma okanye zokutshintsha ukhetho lwakho lonxibelelwano. Uya kumangaliswa kukuba zingaphi ii-imeyile ezikhethwe ngabantu, ke bakhumbuze ukuba bongezwe njani kuluhlu lwakho lwe-imeyile! Umzekelo: Njengomthengi wethu, ukhethwe kwezi ncwadana zeendaba. Ukuba ungathanda ukuphuma okanye uhlaziye ukhetho lwakho lonxibelelwano, cofa apha.
Ukungqinelana ngumba ophambili kubume bakho be-imeyile kunye nekopi, ke useta isakhelo sayo nganye i-imeyile yakho ukuze ababhalisi baqonde kwaye baxabise nganye nganye. Xa useta okulindelweyo kwaye ungade udlule kubo, ababhalisi bakho baya kuvula, bacofe, kwaye bathathe inyathelo kude ngakumbi. Oku kuya kukhokelela kuthethathethwano olungcono, ukufunyanwa, kunye nokugcinwa kwabathengi bakho.
tags: emailumzimba we-imeyileimeyile call kwisenzoikopi ye-imeyileUkubhalwa kwe-imeyileimeyile ctaUkubandakanya i-imeyileokubhalwe ngasezantsi kwe-imeyileukufomatha i-imeyileImizobo ye-imeyileIntloko ye-imeyileemail MarketingUkuvula i-imeyileimpendulo ye-imeyileUkugcinwa kwe-imeyileUmbuliso we-imeyileamacandelo e-imeyileUmxholo wesifundo se-imeyilekuqala
Thumela i-imeyile nge-SMTP kwi-WordPress neMicrosoft 365, Live, Outlook, okanye Hotmail